1953-1967 Evinrude Johnson 3HP Litetwin Ducktwin Akụ-UP Usoro | Outboard Boat Motor Mmezi
Were ya Fishing!
1953-1967 Evinrude Johnson 3HP Litetwin Ducktwin Akụ-UP Usoro
The moto maka ọrụ nke a bụ Model 3303S Serial B 18010.
Nke a bụ otu ihe nlereanya nke nna m ochie nwere mgbe m bụ nwata. Enwere m ọtụtụ ihe na-atọ m ụtọ maka ụgbọala a ma chọọ ka mmadụ weghachite maka ọtụtụ afọ. N'ikpeazụ, enyi m nyere m moto a n'ihi na ọ na-eme agadi iji jiri ya. Ọ maara site na mmeghachi omume m mgbe mbụ m hụrụ na m ga-edozi ya, nke ga-agba ọsọ nke ọma ma jiri ya mee ihe nke ọma. A na-echekwa ụgbọ ala a na gas ka ọ dị n'ime tank maka afọ abụọ ma ọ bụ atọ. Enwetara m ya ka ọ na-agbapụta ndụ, ọbụna na mmanụ ochie, ma aghọtara m na ọ ga-achọ ezigbo ụda olu. Ọ na-agbanye gas site na carburetor. Ekwenyere m na mgbe m gụchara ụgbọala a, ọ ga-agba ọsọ ọ bụla dịka o mere mgbe ọ dị ọhụrụ. Ị nwere ike ịzụta moto ndị a maka gburugburu $ 150 ka $ 200 na e-Bay. Ọ bụrụ na ị dị njikere ịzụta ihe dịka $ 100 n'akụkụ ụfọdụ, ị nwere ike igbụ ya ma mee ya ka ọ dị ka ọhụụ. Na-enweghị akụkụ maka ntanetị, ọ gaghị agba ọsọ n'ihi ihe ndị m ga-akọwa ka m dere usoro a.
The na-enye aka ndị mmadụ na iboats.com boating forums nyere ndị na-esonụ ozi banyere nke a moto.
Evinrude nlereanya 3302:
Ndahie: 5.28 cu.in. = 86.5 CCM
Arọ: 34 lbs. = 15.4 n'arọ
Gear ruru: 17: 28
Icheku ọkụ plọg: onye mmeri J6C gapped na .030 "(J6J bụ agaghịkwa dị)
Lower unit mmanụ: OMC / BRP 'HiVis' ma ọ bụ Ẹkot 80 / 90W outboard gearcase mmanụ si Walmart, wdg
Mmanụ ụgbọala / Oil mix: 24: 1 87 octane gas na TC-W3 outboard mmanụ (ichefu banyere SAE 30w).
Ka m na-agbagha ụgbọ ala a, ana m eme atụmatụ ịmecha ihe niile m nwere ike iji akwa na akwa ncha. E nwere ọtụtụ ndị na-ehicha ihe dị iche iche maka nke a, mana m na-ejikwa onye na-ehicha ụlọ dị ọcha nke m hụrụ n'okpuru sink. Olileanya, m ga-eweghachi ya tupu nwunye m chọpụta na ọ na-efu. M na-eme atụmatụ ịhazi akụkụ ndị a ka m wepụ ha.
Were anya Motor-ekpuchi - PỊA EBE A maka nkọwa.
Power Head - Tupu ị kpebie ịkụgharị ụgbọ ala gị, ịchọrọ ijide n'aka na ụgbọala ahụ ga-agbanye ma ị nwere mkpakọ na abụọ cylinders. Ọ bụrụ na moto ahụ agaghị agbanye site na ịgbanwuo ọkpụkpụ maọbụ na ọ dị ka enweghị mkpakọ, mgbe ahụ, ụgbọ ala gị chọrọ ihe karịrị ntanetị dị mfe. Ị ga-ekpebi otú ị ga-esi chọọ idozi ụgbọala gị na otú oke gị ga-esi rụọ ọrụ gị. Ọ na-adị mfe ịnweta ụda olu. Pistons na-ewepụta ma na-eweghachi mkpakọ na-agbakwasị ụkwụ n'ogo ọhụụ na-enweghị ike karịa ihe a na-ekwu. Achọghị m ịsị na enweghi ike idozi moto maọbụ na ọ gaghị aba uru ma ọ bụrụ na ọ bụ ya na moto m na-eji maka isiokwu a, ọ dịghị mkpa. N'okwu ọzọ, aghaghị m ịhapụ pistons na ụgbọala HP Johnson 15 ma nye ya ndụ ọhụrụ. Ị nwere ike ịnweta akara nchịkọta na mpaghara akpaaka gị na-echekwa maka $ 20 ma ọ bụ $ 30.
Ị nwere ike ịchọrọ eriri ụda na eriri ụdọ. O nwekwara ike iji dochie mmiri ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ihe ndị a niile ka dị ma ọ dịghị mkpa maka ọrụ a.
Carburetor - Oge obula i nwere ihe ochie moto na ọdụ gburugburu n'ihi na a mgbe, i nwere ike iche na carburetor kwesịrị ọrụ. Gas, karịsịa mgbe a gwara mmanụ ga na-atụgharị ghọọ ma ọ bụ n'ụzọ chịngọm gị carburetor. Ezie na e nwere ọtụtụ carburetor ihicha nwekwara ị pụrụ itinye gị mmanụ ụgbọala tank ma ọ bụ ịgba kpọmkwem n'ime carburetor, ha agaghị abịa nso n'imezu otu ihe dị ka a carburetor akụ-elu. Ọ bụrụgodị na moto e echekwara na-enweghị mmanụ ụgbọala na carburetor, na gaskets nwere ike nkụ na ịgbawa ma ọ bụ ngwa ngwa njọ mgbe ị na-agbalị iji ya ọzọ. Nanị ụzọ jide n'aka na carburetor na-aga na-arụ ọrụ nke ọma bụ iji wepu, ebukọtala, dị ọcha, na ịchịkọtaghachi na ọhụrụ akụkụ, dochie, na-eme mgbanwe nke bụ iji na-arụ a carburetor akụ-elu. PỊA EBE A maka zuru ezu foto na usoro maka n'ịrụ carburetor akụ na-elu-a moto.
mgbanye System - Ewezụga ebua plọg na nkwụnye wires, niile nke mgbanye usoro dị n'okpuru flywheel. The ụdị magneto mgbanye a moto bụ Flywheel Magneto na-emebi Points. The ọrụ nke mgbanye usoro bụ n'ịwa ezuru voltaji (Gburugburu 20,000 volts) na-awụlikwa elu na ọdịiche na icheku ọkụ plọg eke a icheku ọkụ na na amụnye na mmanụ ụgbọala / ikuku ngwakọta, na iji jide n'aka na voltaji na-anapụta ihe ji nkwụnye na kpọmkwem nri oge PỊA EBE A maka zuru ezu foto na usoro maka n'ịrụ mgbanye usoro akụ na-elu- n'ihi na nke a moto.
Impeller na Lower Unit -
tank Testing - ezie na abụghị kpọmkwem a ule tank, m jupụta elu a 55 lita gbọmgbọm, gere ntị nke moto na ihu na ọkụ ya. Ị na-achọghị na-agba ọsọ moto si na mmiri mgbe nile, na ọ dighi ezi ihe n'ụzọ na-etinye ntị muffs a moto, n'ihi ya, ọ nwere na-anwale ma na a ụgbọ mmiri na a mmiri ma ọ bụ ụfọdụ tank. Obi dị m ụtọ na m na-agbalị a na a ọdọ n'ihi na moto mere nwere nsogbu ụfọdụ dị mkpa ka e kwara. Ọ tụgharịrị na mmiri e ekesa gburugburu cylinders n'ihi na moto ga-ekpo ọkụ mgbe banyere a nkeji nke na-agba ọsọ na m nwere na-mechie ya tupu ọ ga-aghọ mebiri emebi. Nke a ekpo oke ọkụ nsogbu abụghị ìhè ozugbo n'ihi na mmiri na-spraying nke obere tinyekwa ọdụ ụgbọ mmiri na ala unit. Mgbe m chere na moto na-agba na-ekpo ọkụ, m splashed ụfọdụ mmiri na cylinder-isi, ọ malitere ozugbo sizzle na chigharịkwuuru uzuoku. Nke a pụtara na isi bụ dịkarịa ala, 212 degrees Fahrenheit mgbe ọ ga-abụ na gburugburu 150 degrees Fahrenheit agba ọsọ. Mgbe edikpu, obi dị m ụtọ na m nwere amamihe ga-emechi moto ala ka ọ na-ajụkwa oyi tupu agbali-amalite na-agba ọsọ ya ọzọ ya ọzọ.
Gwara ekpo oke ọkụ Nsogbu na Jụrụ System - Up a mgbe, m na-wetara cylinder isi n'ihi na moto ga ntughari na o yiri ka ezi mkpakọ. Na moto ekpo oke ọkụ, ọ bụ doro anya na m ga-igwu miri chọpụta ihe mere mmiri e ekesa site na ike isi. biko pịa Ebe a na-agụ banyere nkọwa nke a na usoro.
More tank Testing - Mgbe na-aga azụ na-gwara nsogbu na obi jụrụ usoro, ọ bụ oge na-eme ụfọdụ tank ule ọzọ. My tank ẹkewetde nke a dị mfe 55 lita gbọmgbọm. The mmezi ụlọ ahịa ga nwere ọtụtụ ibu ule tankị. Ha ga-enwe ule props ka a ibu na moto-enweghị atụgharị elu mmiri nke ukwuu. Ebe ọ bụ na nke a bụ a obere moto, m buru ụzọ hapụrụ prop na na chụọ n'ọrụ elu ụgbọala na mmiri gbọmgbọm. My mbụ nchegbu bụ ịhụ na ọ bụrụ na moto ga overheat na m efe, ọ daghị. Na mbụ, ndị moto yiri ka ha adịghị na-agba ọsọ anọgide dị ka a na-coughed na sputtered na kere a nnukwu ígwé ojii nke-acha anụnụ anụnụ ọkụ. M mgbe ahụ ghọtara na ọ bụ ezie na m kpochara na gas tank, e nwere eleghị anya ụfọdụ ahụ na-n'ime carburetor. Mgbe na-agba ọsọ na moto nke a mgbe, m wetara carburetor nnukwu efere na ala-ọsọ ugboelu na kpochara ha. M ugboro ugboro na usoro a ọtụtụ ugboro. O yiri ka ndị vibration nke moto na-agba ọsọ a na-akụ niile crud rụrụ. Nke a moto ama e-agba ọsọ na ọ dịkarịa ala 10 ma ọ bụ 12 afọ ya mere nza nke crud na tank na mmanụ ụgbọala e. M nwere nrọ nke moto malite na nke mbụ esiri na-agba ọsọ n'ụzọ zuru okè mgbe akụ elu ma n'ezie, ọ na-agba ọsọ n'ihi na a mgbe tupu ya ga-amalite na-eme ihe dị ka a ọma ụgbọ mmiri moto ọzọ. The bụghịzi moto efehe, mma o yiri ka ọ na-eme dị ka ọ bụrụ na ọ nọ na-agbajikwa na. A 55 lita gbọmgbọm abụghị ezigbo maka ule n'ihi na moto ga-eme ka ezi a torrent mgbe ọ na-agba ọsọ ngwa ngwa. Ọzọkwa, ahụ esiri na mmiri mere ka moto na adị na-akwụsịlata. M nwara kpatụ carburetor na-eme ka ụgbọala na-abaghị uru ma a na-kasị mma mere na a ọdọ ebe. M efehe a di na nwunye tankị nke manu site moto na ihu ọma na ka ọ na-anọdụ ala n'ebe ahụ ma na-agba ọsọ n'ihi 3 ma ọ bụ 4 awa mgbe m dị ọcha, m na-arụ ọrụ ebe. M bụ nchegbu na moto agwụghị n'ụzọ zuru okè na tank ma m obi ike site na a enyi na moto ga na-akpa àgwà ka mma mgbe ọ bụ na a ụgbọ mmiri na na-emeghe mmiri, na dị ka ọ tụgharịa si, ọ bụ nri . Mgbe m mechara ruo ebe m nwere ike pụọ na a ọdọ na a moto, m nnọọ obi ụtọ na ụzọ ya rụrụ. M na nwere nke a moto si ọtụtụ ugboro ugbu a na ọ na-agba dị ukwuu. M ga-esi ọtụtụ Ekele si n'etiti ndị na-enwe mmasị a 42 afọ moto na m dịghachi ndụ. Ana m atụ anya na-arụ ọrụ na-ede banyere ihe Motors n'ọdịnihu.
Were Motor Fishing - Ọ bụ February 27, 2009, na Indiana ma m nnọọ ike na-eche. M wee m Evinrude Lightwin ka Turtle Creek esite nnọọ n'ebe ndịda ka tere Haute Indiana nwalee ya. Turtle Creek esite na-ụtọ site a coal-chụọ n'ọrụ ike amụba osisi. Gụọ ihe ndị na-esonụ isiokwu ịchọpụta otú m azu njem wee na otú m moto efehe.
Na-anụ ụtọ Motor - Ugbu a na enwere m moto a ma na-agba ọsọ nke ọma, enwere m obi ụtọ na ya. Ugbu a, ọ bụ May 10 ka m ji ụgbọala a pụọ ​​na 4 ma ọ bụ 5 ugboro. Oge ọ bụla m ji ya, ọ dị ka ọ na-agba ọsọ ka mma. N'uhuruchi ikpeazu, na Mothers Day, ezinụlọ anyị nwere nzukọ na nwanne m nwanyị nke dị n'ọdọ mmiri dị mma. Enwere m obere obere ụgbọ mmiri nke bụ 15 'Gheene Classic. Ụgbọ mmiri a dị ka ụgbọ mmiri fiberglass buru ibu na akụkụ azụ maka moto ụgbọ mmiri. Enwere m ọsọ dị ka 25 HP na ụgbọ mmiri a ma ejiri m 3 HP Evinrude Lightwin mụọ ebe ahụ na echiche nke ịkụziri nwa m 8 afọ na nwa nwanne nne 9 otu esi agba ọsọ. Mgbe m gụsịrị akwụkwọ ole na ole, ewepụrụ m ụmụ okoro ahụ ka ha wee gbaga n'ofe ahụ ruo mgbe ha nwere afọ ojuju. Anọ m na-ahụ ha n'ụgbọ mmiri ọzọ na igwe mpempe 25 HP ma ụmụ okorobịa ahụ mere onwe ha mma. Naanị ụmụ nwoke nọ n'ụgbọ mmiri ma ugbu a karịa nke ọzọ, ụgbọ mmiri ahụ gafere na 8 MPH. Ọbụna ha nwere ike ịmalite ụgbọ ahụ n'onwe ha. Ụgbọala ahụ nwere ntụkwasị obi ma mgbe mmalite mmalite ga-amalitegharia n'oge ọ bụla na nke mbụ. Enwere m ezigbo obi ụtọ na obere ụgbọ ala a nke ga-enye ọtụtụ afọ iji ihe na ncheta. M na-eme atụmatụ iwepụta ya na m dịka ihe nchekwa ma ọ bụ ihe maka ụmụ okoro igwu egwu na ịkụ azụ azụ na Canada mgbe e mesịrị na ọnwa a. Ugbu a bụ oge iji tụgharịa uche gaa na nke ọzọ ụgbọala m nwere ebe a nke ọ dị mkpa ka edozi ma dezie ya.
N'ịkụ azụ Canada